The Isingeniso Isicelo seselula silula ukusebenzisa futhi imiphumela ingaba mnandi impela. Ngizokwabelana ngeminye yemiphumela yami lapha. Inothi eliseceleni… azikhohlisi kakhulu, zimane nje zinamahloni, ziyesabeka, futhi ziyahlekisa.
Cabanga nje, isibonelo, izithombe, umsindo, noma ividiyo esebenzisa ubuchwepheshe obunzulu ukusetha usopolitiki. Noma ngabe ikhonjwe njenge-deepfake, umphumela ungahamba ngejubane lezokuxhumana ukuze usebenzise umbono wabavoti. Futhi, ngeshwa, iphesenti elikhulu labavoti - ngenkathi lincane - lingakukholwa.
The ubuchwepheshe bokukhiqiza imithombo yezindaba ejulile ngumthombo ovulekile futhi uyatholakala kuyo yonke iwebhu. Yize sikubona kwifilimu yesimanjemanje (amavidyo kaCarrie Fisher asuka ngeminyaka yama-1970 ayesetshenziswa ekuzameni okukhulu eRogue One), asikaze siwabone emakethe… kodwa sizowabona.
Kuzo zonke lezi zibonelo, i-deepfake ayikho lapho ukukhohlisa kepha ukuthuthukisa ukuxhumana. Kungumugqa omncane ... futhi amabhizinisi kuzofanele aqaphele ukuhamba kuwo!